स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको ८.८ प्रतिशतमा आवास कर्जा योजना, बैंक प्रतिको बिश्वाश बढ्ने आशा – Insurance Khabar
स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको ८.८ प्रतिशतमा आवास कर्जा योजना, बैंक प्रतिको बिश्वाश बढ्ने आशा
प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०७४, आईतवार ०६:१२
काठमाडौं फाल्गुन २० । बैंकहरुले बचत र मुद्दती खाताको ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा गरीरहदा स्ट्याण्डर्ड चाटर्डले ८.८ प्रतिशतमा आवास कर्जा योजना ल्याएको छ । मासिक किस्ताको भार कम गराउन नयाँ आवास कर्जा योजना ल्याएको बैंकले जनाएको छ ।
तपाइ सस्तो आवास कर्जा खोजिरहनु भएको छ ? कर्जा महंगो भएर नयाँ आवास खरिद वा निर्माण गर्न पाउनु भएको छैन ? अब चिन्ता नगर्नुस स्ट्याण्डर्ड चाटडै बैंकले अहिले को बैंकिंग क्षेत्रको सबै भन्दा सस्तो सस्तो ब्याजदरमा आवास कर्जा योजना ल्याएको छ ।
आवास कर्जा लिदा सेवा शुल्क १.२५ प्रतिशत लाग्ने बैंकले जनाएको छ । पुर्ण आवास कर्जा लिनेलाई बैंकले निःशुल्क धितोको मूल्याँकन, निःशुल्क कर्जा सुचना शुुल्क, निःशुल्क क्रेडिट कार्ड र अनलाइन बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने जानकारी दिएको छ ।
कर्जाको आधार दर बमोजिम मात्र परिवर्तंन हुने बैंकले जनाएको छ । गत पुृससम्म बैंकको आधार ब्याजदर ५.८ प्रतिशत छ । अधिकाँश बैंकको आधार दर १० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ ।अरु बैंकहर लाई चक्मा दिने गरी बिदेशी लगानीको स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले आहिलेको समयमा दिएको यो सुबिधाले दिर्घकालमा बैंक प्रतिको बिश्वाश बढ्ने स्ट्याण्डर्ड चाटर्डको आशा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।